श्रीमान् विदेशमा, छोरासहित श्रीमतीले किन गरिन आत्महत्या ? – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / समाचार / श्रीमान् विदेशमा, छोरासहित श्रीमतीले किन गरिन आत्महत्या ?
श्रीमान् विदेशमा, छोरासहित श्रीमतीले किन गरिन आत्महत्या ?
चैत १२ । वाकु–३ सोलुखुम्बुकी ३० वर्षीया सुमित्रा राईले ९ वर्षीय छोरालाई साथमा लिएर खोलामा हाम फाली आत्महत्या गरेकी छन् ।
श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा रहेका सुमित्राले छोरालाई साथमै लिएर इङ्खु खोलामा हाम फालेकी हुन् । गत शुक्रबार इङ्खु खोलाको किनारमा आमाछोराको शव भेटेपछि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले सुमित्राले आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
शव परीक्षणको प्रतिवेदन र अन्य स्थलगत अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सुमित्राले छोरालाई पनि साथमै लिएर खोलामा हाम फाली आत्महत्या गरेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Previous हाई सोल्टीनी भन्दै लभ परेकी भेनिसा एउटै बेडमा दुईजनासँग शरिर सुम्पन तयार नहुदा मुत्युको मुखमा
Next होली मनाउँदा तीसको मृत्यु